Botsoana: Toerana ho any safari
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Botsoana: Toerana ho any safari
by Dr. Elinor Garely - tonian-dahatsoratry ny divay.travel
Mpanoratra Dr. Elinor Garely - tonian-dahatsoratry ny divay.travel
Fantaro Alohan'ny handehananao
Rehefa mandinika fialantsasatra safari any Botswana dia iray amin'ireo fanontaniana voalohany napetraka hoe: “Milamina ve?” Manoro hevitra ireo mpitsidika ny Travel.state.gov mba hanao fitandremana “ara-dalàna” rehefa mandeha any Botswana. Ny dikan'izany dia ny firenena manana heloka bevava, toy ny firenena hafa; na izany aza, matetika ny mpitsangatsangana tsy mahita ny manodidina azy ka lasa lasibatra. Tsara raha mailo ny zava-tsarobidinao sy ny tenanao, na aiza na aiza misy anao.
Raha mpitsidika marobe no mamakivaky an'i Botswana ao anatin'ny vondrona mpizahatany (tena atoro anao), ny hafa kosa mitady ny fahalalahana manao dia tsy miankina. Raha io no safidinao ary mikasa ny hitety ny firenena ianao dia zava-dehibe ny manamarika fa i Botswana dia iray amin'ireo firenena 13 mpandeha ankavia any Afrika ary mety ho sarotra ny toe-piainana.
Ny làlambe lehibe (làlana 2 matetika) dia manolotra toe-javatra mitondra fiara azo ekena; na izany aza, ny soroka hisintonana ny vonjy taitra dia mety tsy misy ary ny fiara sy kamio sembana matetika dia "mikatona" eo afovoan-dalana. Ny biby, ny zava-maniry, ny orana mivatravatra, ny jiro tsy mandeha, ny jiro fifamoivoizana tsy mandeha ary ny afo eny amoron-dàlana dia mety hiteraka tsy fahitana sy fanafenana ny loza ateraky ny làlana.
Vakio ny lahatsoratra feno amin'ny divay.travel.
Ny vola miditra amin'ny fizahan-tany mihoatra ny fahatongavany, USD3.3 tapitrisa tapitrisa novinavinaina hatramin'ny faran'ny taona
McDonalds antitra sy lehibe indrindra koa: tsy nekena ny Dolara amerikana